Azonao atoro ahy ve ny fomba ahazoana bakoka tsara?
Alohan'ny zavatra hafa, inona no mahatonga ny fivilian-tsarimihetsika? Nalaina tamin'ny ankapobeny ny valin'ny tranokala na ny rohin'ny blôginao novalian'i Google mampiasa fotodrafitrasa marobe, toy ny rohy, ny taonan'ny sehatra, ny vatofantsika, ny endriky ny rohy natoraly, sns.Nahoana ianao no tokony hahalala ny fomba tsara ahafahana miverimberina tsara? Raha vao vita ny fananganana backlinks dia lasa iray amin'ireo sehatra manan-danja indrindra ao amin'ny SEO. Izany no antony tokony hahafantaranao ny toerana mety sy ny hetsika tokony horaisina mba hahazoana ireo valiny azo antoka. Ary hasehoko anao ny fomba ahafahana miverin-dahatsary amin'ny tambajotra sosialy, lahatsoratra marketing, famoaham-baovao amin'ny media, ary tranonkala fifampizarana. Noho izany, andeha isika hijery azy ireo any ambany.
Azo antoka fa ny trano maoderin'ny media sosialy dia mendrika hanorina rohy amin'ny. Ary manodidina ny ampolony amin'ny tambajotra sosialy sy tranonkala fampahalalam-baovao no nahazo ny mpamaky betsaka indrindra, toy ny Google Plus, Twitter, Facebook, sns.Ny zavatra dia ny habetsaky ny sehatra an-tserasera rehetra malaza amin'ny haino aman-jery sosialy amin'ny ankapobeny dia manana sehatra avo lenta. Izany no mahatonga ity fahafaha-manintona mahafinaritra ity soso-kevitra amin'ny fanandramana mba hanamafisana ny fifandraisana amin'ny kalitao voalohany sy ambony indrindra. Ataovy an-tsaina fa noho ny vokatra tsara indrindra eto dia tokony hanomana famoahana famandriham-potoana ianao na famolavolana fahitalavitra. Raha manao izany ianao dia tsy hitombo fotsiny ny mpihaino anao amin'izao fotoana izao, fa mitadiava vahaolana amin'ny mpanjifa izay mampiasa votoaty miavaka sy miavaka izay manome lanjany tena izy, miaraka amin'ny sarin'ny sary, infographics, spreadsheets, sns.
Ity fomba iray ity dia mety ho anisan'ny fomba tsara indrindra ahafahana manatanteraka tetik'ady fanorenana rohy. Ity ny fomba hahazoana bakalorea goavam-be miaraka amin'ny dokam-barotra lahatsoratra - fikarohana fotsiny ny teny fanalahidy marina ary manomana lohahevitra lehibe momba ny lohahevitra. Manaraka izany dia manomboka miasa amin'ny votoatinao mba halefa amin'ny sasany amin'ireo finday malaza indrindra. Amin'izany fomba izany, aza adino ny manolotra rohy manondro ny tranokalanao na blôginao. Ataovy izay hahazoana antoka fa efa misy ny zava-drehetra - ny lahatsoratra roa momba ny vatofantsika, ary ny bokotra sosialy fizarana sosialy dia tokony hapetraka tsara ao anatin'ny asa soratanao.
Ireo tranonkalan'ny haino aman-jery toy ny vaovao dia toerana mahafinaritra hakana rohy ihany - satria satria saika voavidy toerana kely kokoa hiparitaka amin'ny Internet. Raha jerena fa ireo tranonkala media lehibe dia mikatsaka foana ny votoatiny vaovao na tantaram-baovao mahaliana amin'ny tombontsoam-bahoaka, ny ilainao rehetra dia ny manome azy io lahatsoratra momba ny lohahevitra mafana momba ny indostria indostrialy na ny nosy. Ataovy azo antoka tsara ny mamorona lohateny mavitrika sy votoaty mifandraika amin'izany izay mety hahasarika mpamaky betsaka kokoa - ary vita ianao.
Tranok'asa fizarana ny dokam-barotra
Izany dia fomba iray hafa hanorenana ny rohy voajanahary, ankoatra ny mahazatra mahazatra ny famerenana ireo rakitra mendrika amin'ny DoFollow. Ankoatra izay, ny ankamaroan'ny loharano na loharano mifandraika dia matoky tanteraka ireo fitaovam-pikarohana lehibe toa an'i Google. Noho izany, io fahitana io dia toa mendrika iray mendrika, sa tsy izany? Ity ny fomba hahazoana rindran-tsavily tsara avy amin'ny tranonkala fifampizarana rakitra - dia manana ny sombin-dahatsoratra havanana (i. f. , tsy lahatsoratra be loatra, na lahatsoratra lava loatra). Raha vantany vao voaomana ny zavatra rehetra, dia tsy maintsy mametraka izany fotsiny ianao ka mamela backlink izay manondro ny làlana mankany amin'ny tranonkalanao na ny bilaoginao Source .